Global Voices teny Malagasy » Shina: Niharan’ny tsikera Shinoa ny Tafika Antserasera Iraniana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Oktobra 2018 19:33 GMT 1	 · Mpanoratra John Kennedy Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Iràna, Shina, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Nitazona ny tontolon'ny twitter Shinoa hitabataba saika nandritra tontolo andron'ny talata ny fanafihan'ny Tafika Antserasera Iraniana ny mili-pikarohana lehibe indrindra Baidu .
Mbola tsy mazava ny anton'ilay fanafihana; mihevitra ny sasany fa noho ny fahitana ireo mpiserasera Shinoa maneho fanohanana ny Hetsika Maintso Iraniana  izany.
Ora vitsy taorian'ny Baidu lasa mainty, maitso, fotsy sy mena, namoaka ny valim-panafihan'izy ireo ny vondrona Shinoa mpijirika milaza ny tenan'izy ireo fa Shinoa Honker, nijirika na naka ny lisitr'ireo tranonkala  izay nahitàna ny an'ireo Mpitarika Faratampony ao Iran, ny filoha Ahmadinejad, ny minisitry ny Raharaham-bahiny, ny Fiarovana sy ny Atitany, ankoatra ny hafa. Mbola azo jerena ato  ny asan'izy ireo.
Na dia malaza be ao Shina aza ny Baidu, mbola mankatò ny manampahefana Shinoa izy ka vokatr'izany, dia nahazo ny anjara dokambarotrany noho ny sivana mavesatra tamin'ireo valim-pikarohana sy ny votoatin'ny mpiserasera amin'ny tolotra hafa omen'ny orinasa. Rehefa hita niharihary fa nihevitra ireo mpanafika aterineto Iraniana fa nandefa hafatra ho an'ireo feo Shinoa liam-pandrosoana manakiana ny governemantany, nanomboka nivezivezy tao amin'ny Twitter ny vazivazy ary niparitaka tany amin'ny tranonkala Shinoa hafa. Mbola tsy fantatra  raha fantatr'ireo “miaramila-antserasera” avy amin'ny firenena roa tonta ny antony nifanafihan'izy ireo.
@shizhao : Noratrain'ny vahoaka Shinoa ny fahatsapan'ny Iraniana…..
@line_4 : Na inona na inona atao, aza lazaina amin'ny Tafika Antserasera Iraniana fa ny GFW no tambajotra lehibe aterineto Shinoa. Raha mikatona ny GFW, dia ho very i Shina. #CN4Iran.
@lianyue : Lazao amin'izy ireo ity: Ry Tafika Antserasera Iraniana, hatramin'ny nakanao an'ny Baidu, dia nikorontana ny fiainako. Tsy afaka miditra Twitter aho (namana Amerikana iray no nanampy ahy nandefa ity sioka ity), miangavy anareo izahay Shinoa mba tsy haninona anay #CN4Iran
@mranti : Faly aho mijery ny tafika Cyber Iraniana mpomba ny governemanta manao adalana amin'ny Baidu.com mpomba ny governemanta. Eny, ataovy maro kokoa azafad
@hecaitou : Tafika Antserasera Iraniana Adala manao adalana amin'ny Baidu.com. Hey！maharikoriko ianao, LAVAKA RATSY izany! #CN4Iran
@hecaitou : Raha esorin'ireo Iraniana mpijirika ny GFW-anay, raha esorinay ny azy ireo, dia ho torana ny roa tonta, ary amin'ny farany, hisy olona an'hetsiny vitsy ho faly fa tsy voakasika, izay hifandray tanana sy hifampisaotra rehefa mihaona izy ireo. Dia hahatsapa fa kanosa tanteraka ireo mpijirika ireo araka izany…
@LEMONed : Efa ho adiny efatra no nojirihan'ny Tafika Antserasera Iraniana ny baidu.com. Nilaza ny media fehezin'ny fanjakana, CN fa nosomparan'ny mpandray fisoratana anarana Amerikana ny anaran-tsehatra reg info.
@daxa : Faly aho fa nakatona ny Baidu. Mahafinaritra fa rava nandritra ny fotoana lavalava ity orinasa maniry fatratra ny ho tokana, andevon'ny Antoko ity.
@fearlessz : andefaso mailaka ireto adiresy roa ireto, lazao amin'ny Tafika Antserasera Iraniana fa ny lakilen'ny aterinetontsika dia ny GFW! [manda afo lehibe] soldier@cyberarmyofiran.com soldier@ircarmy.com #CN4Iran #ICA #baidu
@cctvWeb : Henoy, ry Tafika Atserasera Iraniana, na dia nahazo an'ny baidu.com aza ianareo, mbola manana ny matanjaka qq.com, cctv.com, people.com.cn sy xinhuanet.com izahay #CN4Iran
@QmQ : #CN4IRan tsy misy dikany ny fijirihana ny baidu satria mampiasa cctv.com xinhuanet.com izahay. Saingy tsy mihevitra aho fa afaka mijirika ireo tranonkala ireo ny tafika antserasera iran
@CN4IranMsVFAB : miahiahy aho fa nojirihana ny Baidu satria mahafantatra ny fanohanan'ny #cn4iran ny #iranelection. Nojirihan'izy ireo ny Twitter tamin'ny farany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/18/128003/
 fanafihan'ny Tafika Antserasera Iraniana : https://globalvoicesonline.org/2010/01/12/china-baidu-hacked-by-iranian-cyber-army/
 maneho fanohanana : https://globalvoicesonline.org/2010/01/10/iran-chinese-cyberactivists-support-iranians/
 Hetsika Maintso Iraniana: http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Movement
 lisitr'ireo tranonkala: http://docs.google.com/View?id=dhddqcvk_167gnjm75cn
 Mbola tsy fantatra: http://www.thedarkvisitor.com/2010/01/baidu-pwn3d-by-iranian-dns-hijackers/